रौतहटको चु्नावी माहोलले सबै चकित ! « News of Nepal
रौतहटको चु्नावी माहोलले सबै चकित !
किरण भट्टराई (रासस), रौतहट । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा जिल्लामा कसको पक्षमा चुनावी परिणाम आउँछ भन्नेमा मतदाता सामु लेखाजोखा हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेश सभाको आठ निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा पार्टीगत आस्थाका साथै उम्मेदवारको जातीयताको आधारमा समेत मतदाताले मतदान गर्ने भएकाले मतपरिणामबारे उम्मेदवार नै अन्यौलतामा देखिन्छ । जिल्लामा मधेशी र पहाडीभन्दा पनि मधेशीभित्रकै जाति÷समुदायका आधारमा मतदान हुने भएकोले आफ्नो जितबारे कुनै पनि उम्मेदवार ढुक्क देखिँदैनन् ।
जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि क्षेत्र नं १ मा नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापति कृष्ण यादव, वाम गठबन्धनबाट नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का नेता एवं पूर्वराज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनबाट राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झा, नेपाली जनता दलका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिचरश साह लगायतका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।
यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार मानिनुभएका राजपाका झाविरुद्ध पूर्वसभासद् बबन सिंहको बागी उम्मेदवारी परेपछि राजपाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य सिंहको उम्मेदवारीले झाको विजय यात्रालाई कठिन बनाएको हो । उम्मेदवार झा भने सिंहको उम्मेदवारीले आफूलाई कुनै असर नपर्ने भन्दै आफ्नो जित निश्चित रहेको बताउनुहन्छ । काँग्रेस र वाम गठबन्धनका उम्मेदवार भने सिंहको उम्मेदवारीको फाइदा उठाउने दाउँमा छन् ।
त्यस्तै क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली काँग्रेसबाट पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम, वाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार पूर्वराज्यमन्त्री मुस्ताक आलम ९राजाबाबु०, राजपा–फोरम गठबन्धनबाट फोरमका किरणकुमार साहबीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ । यसअघि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका काँग्रेसका उम्मेदवार आलमलाई हराउनुभएका मुस्ताक केही दिनअघि एमालेमा प्रवेश गरी उम्मेदवार बन्नुुभएको हो ।
यो क्षेत्रमा नातामा मामा पर्ने काँग्रेसका उम्मेदवार आलम र एमाले उम्मेदवार मुस्ताकबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामका आधारमा वाम गठबन्धनअगाडि रहे पनि काँग्रेस उम्मेदवार आलमले केन्द्रीय नेताको छविको फाइदा उठाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । रौतहटको क्षेत्र नं ३ बाट वाम गठबन्धनबाट बिनाविभागीयमन्त्री एवं माओवादी नेता प्रभु साह, काँग्रेसका पूर्वसांसद सुनिलकुमार यादव ९जितेन्द्र० र राजपा गठबन्धनका ओमप्रकाश जयसवाल चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।
गत स्थानीय तहको मत परिणामका आधारमा यस क्षेत्रमा काँग्रेस, राजपा र फोरम तीन पार्टीको संयुक्त मतभन्दा वाम गठबन्धनको मत बढी रहेको फाइदा मन्त्री साहले उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रौतहटको क्षेत्र नं ४ बाट काँग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिना, वाम गठबन्धनबाट एमालेका डा वंशीधर मिश्र र फोरम–राजपा गठबन्धनका कन्तमुनि जयसवालबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ ।
सबै पार्टीको जित्ने दाबी
मन्त्री तथा क्षेत्र नं ३ का माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार प्रभु साह स्थानीय तहको मत परिणाम र देशभर वाम गठबन्धनको पक्षमा देखिएको माहोलका कारण गठबन्धनले नै जिल्लाको सबै क्षेत्रमा जित्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जनताले स्थायी सरकारमार्फत विकास र समृद्धि खोजेका छन्, यसका लागि वाम गठबन्धनलाई नै मत दिन्छन् । मधेशका बाँकी रहेका माग पूरा गर्न पनि गठबन्धनले नै जित्नुपर्छ ।”
काँग्रेसबाट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार कृष्ण यादव स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी तह आफ्नो पार्टीले जितेको भन्दै अहिले पनि चारवटै क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले जित्ने जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “वाम गठबन्धन मधेश विरोधी र प्रजातन्त्र विरोधीको गठबन्धन हो । मधेशीको अधिकार, रक्षा र प्रजातन्त्र जोगाउन जनताले काँग्रेसलाई मतदान गर्नेछन् ।”
राजपाबाट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार अनिल झा मधेश आन्दोलनको घाउ र पीडा अझै जनताले नबिर्सेकाले आफ्नो गठबन्धनको जित निश्चित रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रमुख तीन दल अरू सबै कुरामा मिल्ने तर मधेशी जनतालाई अधिकार दिने कुरामा नमिलेको नाटक गर्ने गरेकाले जनताले यसपटक उनीहरुलाई दण्डित गर्छन् ।”
क्षेत्र नं ४ का एमालेका उम्मेदवार डा वंशिधर मिश्र वामपन्थीको बहुमतको सरकार हेर्ने जनताको चाहना रहेकाले सोही अनुरुपको परिणाम आउने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अरू सबै पार्टीको चरित्र जनताले बुझिसकेका छन् । राष्ट्रियताको संरक्षण, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वाम गठबन्धका उम्मेदवारलाई नै जनताले जिताउँछन् ।”
मधेशी गठबन्धन कमजोर
मधेस आन्दोलनमा सधँै अग्रमोर्चामा रहँदै आएको रौतहटमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मधेश केन्द्रित दल भने तुलनात्मक रुपमा निर्वाचनमा कमजोर देखिएका छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिँदासमेत बलियो देखिएका राजपा र फोरम नेपाल अहिले गठबन्धन बनाएरै चुनावी मैदानमा ओर्लिंदासमेत आशातीत बलियो बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा काँग्रेसको आठ, फोरमको चार, माओवादी केन्द्रको तीन, राजपाको दुई र फोरम लोकतान्त्रिकको एक उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
क्षेत्र नं १ मा राजपाका उम्मेदवार झा बलियो मानिए पनि अन्य तीन क्षेत्रमा भने मुख्यतः वाम गठबन्धन र काँग्रेसका उम्मेदवारबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ । प्रदेशसभाका केही क्षेत्रमा भने फोरम र राजपाका उम्मेदवार बलियो देखिएका छन् । राजपाका नेता अनिल झाले प्रचार गरिएजस्तो आफूहरु जिल्लामा कमजोर नरहेको जिकिर गर्दै स्थानीय प्रशासनले आफूहरुलाई पेलेर कमजोर बनाउन प्रयास गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
कोरोनाबाट अत्यन्त प्रभावित दश देशका सङ्क्रमित र मृतकको